Profaịlụ ụlọ ọrụ - Shandong Yuqiang Ngwa Ngwaahịa Co., Ltd.
E guzobere Shandong Yuqiang Hardware Products Co., Ltd. na 2003. Dị na Chengxi Industrial Park, Leling City, Shandong Province, na isi ụlọ ahịa ya dị na Qingdao. Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-ejikọ R&D, mmepụta na ire nke ọnụ ụzọ ụlọ na ngwaike windo.
Ngwaahịa ndị bụ isi bụ aluminom-plastik tụgharịrị n'ime, n'ime na mpụga, ihe mkpuchi windo oghere windo; ọkụ retardant ire ọkụ retardant window window ngwaike, eletriki window oghere, ventilators, wdg
Anyị guzobere nyocha na mmepe, imewe, nrụpụta ebu, nkedo, stamping, ọgwụgwọ elu na mgbakọ dịka usoro mmepụta otu nkwụsị.
anyị nwere ikike mmepụta ihe karịrị nde 1.5 (iberibe). Ụlọ ọrụ ahụ na -ekpuchi mpaghara nke mita mita 50,000; ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ karịrị 350, nke ihe karịrị 90 bụ ndị ọrụ njikwa na ndị ọrụ aka ọrụ.
A na-eji ngwaahịa anyị n'ihe karịrị ọrụ injinịa 172, ma na-ejigide mmekọrịta dị mma na ogologo oge yana ihe karịrị ụlọ ọrụ 200 dị ka Beijing Zhong jian ji ye, Qingdao Lu Cheng, Qingdao Port Authority, China Sinopec, China Power, Huan qiu Group, Beihai Jiandui, wdg, na elu technology Technology, magburu onwe ngwaahịa mma na magburu onwe mgbe-sales ọrụ, nke meriwo ntụkwasị obi na otuto nke ndị ahịa.
Uru nke Ngwa ngwaike Yuqiang:
Mma akụrụngwa, mụbara ikike ịmụba okpukpu abụọ